yakagadzirirwa kuchengetedza unhu hwako. Taura nesu kana iwe une mibvunzo kana matambudziko pamusoro pekushandiswa kweDe Data yako uye tichafara kukubatsira.
Nokushandisa sendi ino kana / uye masangano edu, unobvumirana neKushandura kweZvako Dhiyabhorosi sezvinotsanangurwa muNyaya Yechirongwa.
Tsanangudzo dzakashandiswa muNyaya iyi
Kudzivirirwa kwemashoko isu tinotevera
Ndezvipi kodzero dzaunayo maererano neDe Data yako
Izvo Zvese Data Data yatinounganidza pamusoro pako
Nzira yatinoshandisa nayo Data yako yega
Ndivanaani vane ruzivo rweMunhu weDain Data
Maitiro atinoita sei data yako
Mashoko pamusoro pekiki
Personal Data - chero ruzivo rupi zvaro runobatanidza munhu anozivikanwa kana anozivikanwa wemunhu.
kugadzira - kushanda chero kupi zvako kana sarudzo yebasa iri kuitwa pa Personal Personal kana pazvitsuwa zveBhuku Data.
Dhiyabhorosi nyaya - munhu wepanyama uyo Dunhu reDunhu Rinoitwa.
mwana - munhu wepanyama ari pasi pemakore e16.
Isu / isu (zvichive zvakatorwa kana kwete) -
Isu tinopikira kutevera mazano anotevera ekuchengetedza dambudziko:
Kugadzirwa kunobvumirwa nomutemo, kwakanaka, kujeka. Basa redu rekutengesa rine zvine mvumo yepamutemo. Tinogara tichifunga nezvekodzero dzako pamberi pePerson Personal Data. Tichakupa ruzivo pamusoro peKushandiswa pane chikumbiro.
Kuchengetedzwa kunogumira kune chinangwa. Basa redu rekushanda rinoenderana nechinangwa chekuti Personal Data yakaunganidzwa.
Kuchengetedzwa kunoitwa nehana shoma. Isu tinongounganidza uye Tinoshandisa zvishoma zvishoma zveBy Personal Data zvinoda chero chinangwa.
Kuchengetedzwa kunogumira nenguva. Hatingachengetedzi data yako yega kwenguva yakareba kudarika.
Tichaita zvose zvatinogona kuti tive nechokwadi chekururama kwe data.
Tichaita zvose zvatinogona kuti tione kuvimbika nekuvanzika kwe data.
Dhidziro dzeDhidziso dzeDhina
Nyaya yeData iri ine kodzero dzinotevera:
Kodzero yekuwana ruzivo - zvinoreva iwe unofanirwa kuziva kana Shoko rako reMunhu riri kushandiswa; chii chinyorwa chakaunganidzwa, kubva pane chaunowanikwa uye nei uye icho chinoshandiswa.
Kodzero yekuwana - inoreva kuti une kodzero yekuwana iyo data yakabviswa kubva / pamusoro pako. Izvi zvinosanganisira kodzero yako yekukumbira uye kuwana kopi yako yeDunhu Data yakaungana.
Kodzero yekugadziriswa - kureva iwe une kodzero yekukumbira kugadziriswa kana kupera kweDain Data yako isiri yakarurama kana isakakwana.
Kodzero yekuregera - kureva mune mamwe mamiriro ezvinhu unogona kukumbira kuti Dhiyabhorosi yako ishandiswe kubva pane zvinyorwa zvedu.
Kodzero yekudzivirira kushandiswa - kureva kuti pane zvimwe zviitiko zvinoshandiswa, une kodzero yekudzivirira Kudzingiswa kweZvako Dunhu.
Kodzero yekuramba kushandiswa - kureva mune dzimwe mamiriro ezvinhu une kodzero yekupokana neKushandiswa kweZvako Dhiyabhorosi, semuenzaniso wekutengesa zvakananga.
Kodzero yekudzivisa kuongororwa kushandiswa - zvinoreva kuti une kodzero yekuramba kuongororwa kushandiswa, kusanganisira kufungidzira; uye kwete kuzviisa pasi pechisarudzo chakavakirwa chete paA automated Processing. Iko kodzero yaunokwanisa kushandisa pose pose paine chigumisiro cheku profiling chinounza mitezo yepamutemo pamusoro kana kana ichikukanganisa iwe.
Kodzero yekushandisa dhiyabhorosi - une kodzero yekuwana yako Dhiyabhorosi Dhidhiyo mumutauro unogona kuverengwa kana kana zvichibvira, sekutenderera zvakananga kubva kune imwe Processor kune imwe.
Kodzero yekuisa chikwereti - kana chiitiko chatinoramba chikumbiro chako pasi peLungelo reKutsvaga, tichakupai chikonzero chekuti sei. Kana iwe usina kugutsikana nenzira iyo chikumbiro chako chagadziriswa tapota taura nesu.
Zvakakodzera rubatsiro rwe chiremera chepamusoro - kureva kuti une kodzero yekubatsirwa kwekodzero yekuchengetedza uye kodzero yeimwe mishonga yepamutemo yakadai sekuzvitsvaga kukanganisa.
Kodzero yekurega kubvumirana - iwe une kodzero yokubvisa chero chibvumirano chipi zvacho chekugadziriswa kweDain Data yako.
Izvi zvinogona kunge iri kero yako ye-e-mail, zita, kero yekubhadhara, kero yeimba, etc. - kunyanya ruzivo rwakakosha kukuendesa chigadzirwa / basa kana kuti uwedzere unyanzvi hwevabereki vedu nesu. Tinochengetedza ruzivo rwaunotipa kuitira kuti iwe utaure kana kuita mamwe mabasa pawebsite. Iyi nhoroondo inosanganisira, semuenzaniso, zita rako uye kero ye-e-mail.
Mashoko anounganidza zvakananga pamusoro pako
Izvi zvinosanganisira ruzivo runochengetedzwa chete nekiki nezvimwe zvishandiso zvemasangano. Semuenzaniso, ruzivo rwemotokari yako, IP address yako, nhoroondo yako yekutenga (kana pane imwe) etc. Mashoko aya anoshandiswa kuvandudza mararamiro ako. Paunoshandisa maitirwo edu kana kutarisa zviri mukati rewebhu redu, mabasa ako angave akapindwa.
Mashoko kubva kune vamwe vedu
Isu tinounganidza mashoko kubva kune vatinonamatira navo vane chivimbo chokuti vane zvikonzero zvepamutemo zvekugoverana nemashoko iwayo nesu. Izvi zvinogona kunge iwe ruzivo rwawakapa kwavari zvakananga kana kuti vakaunganidza pamusoro pako kune dzimwe nzvimbo dzomutemo. Nyora iyi ndeye: NCS Trust, EFL Trust.
Mashoko anowanika pachena
Tinogona kuunganidza ruzivo pamusoro pako runowanika pachena.
Tinoshandisa yako Data Dunhu kuitira kuti:
Tipei basa redu kwamuri. Izvi zvinosanganisira, semuenzaniso, kunyora kero yako; kukupa mamwe mimwe michina nemashandiro awakakumbira; kukupa zvinhu zvekutsvaga pane zvaunokumbira uye kukurukurirana newe maererano nezvinhu izvi nemashandi; kukurukurirana nekukurukura newe; uye kukuzivisai nezvekuchinja kune chero mabasa.
kusimbisa mukana wako wevabereki;
kuzadzisa chisungo pasi pemutemo kana chibvumirano;
kuti utaure nezve chirongwa chevechidiki iwe iwe kana mwana wako wakanyoreswa naye;
pamusoro pekubudirira nyaya kubva purogiramu dzedu dzevechiduku;
kukutsigira iwe kana mwana wako purogiramu yechidiki
Isu tinoshandisa yako Dhiyabhorosi Dhesi pazvikonzero zvepamutemo uye / kana neMvumo yako.
Pazvikonzero zvekupinda mukonesheni kana kuzadzisa zvibvumirano zvesangano, tinozoita Dunhu reMunhu pane zvinangwa zvinotevera:
kukupa basa kana kutumira / kukupa chibereko;
kutaurirana kana kutengesa kana kutengesa;
Pasi penharaunda inofanirwa, tinoshandisa yako Data Dzevanhu nekuda kwezvinangwa zvinotevera:
kukutumira iwe pachako zvipo * (kubva kwatiri uye / kana kushamwaridzana navo vakasarudzwa);
kutungamirira uye kuongorora shanduko yevatengi vedu (maitiro ekutenga uye nhoroondo) kuitira kuvandudza unhu, maitiro, uye kuwanika kwemishonga / maitirwo anopiwa / akagoverwa;
kuitisa mibvunzo ine chokuita nekugutsikana kwekambani;
Chero bedzi iwe usina kutitaurira zvakasiyana, tinofunga kupa zvipiko / maitirwo akafanana kana zvakafanana nekutenga yako mararamiro / maitiro ekutsvaga kuti ave chido chedu chepamutemo.
Nekubvumirana kwako isu Tichiratidza yako Personal Data nekuda kwezvinangwa zvinotevera:
kukutumira iwe mabhuku uye mapikicha anopa (kubva kwatiri uye / kana vasarudzo vedu vakasarudzwa);
kune zvimwe zvinangwa takukumbira kubvuma kwako;
Isu Tinoshandisa Dhu Data Yako kuitira kuti uite mutoro unomuka kubva kumutemo uye / kana kushandisa yako Data Dzokushandisa pane zvingaitwa nemutemo. Tinochengetedza kodzero yekusazivisa Personal Data yakaungana uye kushandisa chero yakadaro data. Tichashandisa dare kunze kwehuwandu hwePurogiramu iyi chete kana isingazivikanwi. Hatisi kuchengetedza ruzivo rwekubhadhara dzakadai sedhadhi rekwereti. Tichachengetedza mamwe mashoko ekutenga akaungana pamusoro pako kwenguva yakareba sezvaidiwa pakugadzirisa zvinangwa kana zvimwe zvikwereti zvinobva mumutemo, asi kwete kwenguva refu kupfuura makore 5.
Isu tinokwanisa kushandira Dhiyabhorosi Yenyu kune zvimwe zvinangwa zvisingatauri pano, asi zvinowirirana nechinangwa chepakutanga iyo data yakaunganidzwa. Kuti tiite izvi, tichava nechokwadi chokuti:
kuwirirana pakati pezvinangwa, mamiriro uye chimiro cheMunhu WeDzivo akakodzera kuenderera mberi nekugadzirisa;
iyo inoshandiswa mberi inenge isina kukuvadza zvido zvako uye
paizova nekuchengetedza kwakakodzera kweKushandiswa.
Tichakuzivisai zvimwe zvekushandura uye zvinangwa.
Ndivanaani vanogona kuwana yako Personal Data
Isu hatina kugovera yako Dunhu Dhepfenyuro nevasingazivi. Pamwe Dheyo pamusoro pako pane zvimwe zviitiko zvakapiwa kune vamwe vedu vanovimbana navo kuitira kuti tive nekupa basa racho iwe zvichibvira kana kuti uwedzere hutano hwevabereki vako. Isu tinogovana nedheta yako ne:
Paypal kubhadhara. Iwe unoziviswa sezvo izvi zvinowanikwa.
Yedu hurongwa hwevadzidzi:
ICS Trust - yezvirongwa zveNCS chete.
EFL Trust - yemapurogiramu eCSS chete.
Isu tinongoshanda pamwe chete neVashandi vese vanokwanisa kuve nechokwadi chekuchengetedza kwekuchengetedzwa kweDhina Data. Tinozivisa Dunhu reMunhu kune vamwe vatatu kana vashandi vehuruzhinji kana isu tichibvumirwa nemutemo kuita saizvozvo. Tinogona kuzarura Dunhu reMunhu kune vamwe vatatu kana iwe wakabvuma kana kana kune dzimwe mhaka dzepamutemo.
Tinoita zvose zvatinogona kuti tichengetedze Dunhu Dzenyu rekuchengeteka. Tinoshandisa nzira dzakachengeteka dzekukurukurirana uye kutumira dhidhiyo (yakadai seHTTPS). Tinoshandisa anonymising uye pseudonymising pane zvakakodzera. Tinocherechedza hurongwa hwedu hwekugona kutadza nekurwisa.
Kunyange zvazvo tichiedza zvakanakisisa zvedu hatigone kuvimbisa kuchengeteka kwemashoko. Zvisinei, tinovimbisa kuzivisa vakakodzera zviremera zvekuputsika kwemashoko. Tichakuzivisawo kana kune dambudziko kune kodzero dzako kana zvido zvako. Tichaita zvose zvatinokwanisa kuti tidzivirire kuchengetedzwa kwekuchengeteka uye kubatsira masimba kana pane kukanganisa kunoitika.
Kana uine kambani nesu, ona kuti unofanira kuchengeta zita rako rekushandisa uye password.
Hatidi kuunganidza kana kuziva kuchengeta ruzivo kubva kuvana vari pasi pezera re 14 newebsite yedu. Sechirongwa chechidiki, kune chido chekutora ruzivo pamusoro pevechidiki vanofarira, kana kupinda purogiramu dzedu. Vabereki vanotaurirana pamusoro peiyi deta apo data rebereki inopiwa.
Cookies nemamwe magetsi tishandise
Tinoshandisa makiki uye / kana teknolojia yakafanana kuongorora maitiro evanhu, kutarisira webhusaiti, kutarisa kufamba kwevashandi, nekuunganidza mashoko pamusoro pevashandisi. Izvi zvinoitwa kuitira kuti iwe pachako uite uye uwedzere ruzivo rwako nesu.
A cookie idiki duku text file yakachengetwa pakombiyuta yako. Cookies store inozivikanwa iyo inoshandiswa kubatsira kubatsira kuita mawebsite. Tine chete tinogona kuwana makiki akaumbwa newebsite yedu. Iwe unogona kudzora makiki ako pane yekutsvaga cheji. Kusarudza kubvisa makiki kungakanganisa kushandiswa kwako kwemamwe mabasa.
Tinoshandisa makiki kune zvinotevera:
Maokie anodiwa - aya makiki anodiwa kuti iwe ukwanise kushandisa zvimwe zvinhu zvinokosha pane webhusaiti yedu, sekupinda mukati. Aya makiki haatori chero ruzivo rwemunhu.
Kushanda kwekiki - aya makiki anopa kushanda kunoita kushandiswa kwebasa redu zviri nyore uye kunoita kuti zvive nezvimwe zvakasikwa zvaunogona kuita. Somuenzaniso, vangayeuka zita renyu uye e-mail mune mafomu emafomu saka iwe haufaniri kuisa zvakare ruzivo urwu panguva inotevera kana uchitaura.
Analytics makiki - aya makiki anoshandiswa kutarisa kushandiswa nekushanda kwewebsite yedu nemabasa
Kuzivisa makiki - aya makiki anoshandiswa kupa zviziviso zvakakosha kwauri uye kune zvaunofarira. Mukuwedzera, ivo vanoshandiswa kuderedza nhamba yezviitiko iwe unoona chiziviso. Zvinowanzoiswa kune webhusaiti nekutengesa mitambo nemavhidhiyo evhidhiyo yemvumo. Izvi zvinokangamwa kuti wakashanyira webusaiti uye ruzivo urwu rwakagoverwa nemamwe masangano akadai sevashambadziri. Kazhinji kutarisa kana kuparidzira makiki kuchabatanidzwa nekushanda kwepaiti inopiwa neimwe sangano.
Iwe unogona kubvisa makiki akachengetwa mumutombiyuta yako kuburikidza nemagadzirirwo ako. Zvimwe, iwe unogona kudzora mamwe mapeji e-3rd kuburikidza uchishandisa hutsananguriro yekuchengetedza yega sega optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. Kuti uwane mamwe mashoko nezvekiki, shanya allaboutcookies.org.
Isu tinoshandisa Google Analytics kuti tione mutengesi pawebsite yedu. Google ine mazano avo eIndaneti yaunogona kuongorora pano. Kana iwe uchida kusarudza kubva kunze kwekutsvaga neGoogle Analytics, shanyira Google Analytics pepa peji peji.
Supervisory Authority for Data muEngland - https://ico.org.uk - ICO - Information Commision Office
Element Society - danai 0114 2999 214 kuti mukurukure data.
Tinochengetedza kodzero yekuti tishandure kuIndaneti Yechirongwa.
Kugadzirirwa kwekupedzisira kwakagadzirwa 21 / 05 / 2018.